Animoji seyakazvimirira Meseji app | IPhone nhau
Animoji seyakazvimirira Meseji app
Alvaro Fuentes | | iOS 11, iPhone X
Zvinotaridza kuti mushambadzi Simon B. Støvring yakaburitsa iyo Animoji nyowani Apple's Messages app uye akazviita shanda zvakazara zvakazvimiririra. Nekusvika yakavanzika APIs, Støvring yakagadzira yakamira yeApp app inobvumidza vashandisi kunyora Animoji mavhidhiyo anosvika makumi maviri masekondi kureba.
Kana iwe wakashanyira vezvenhau vhiki ino, iwe unogona kunge wakasangana nemuenzaniso mumwe chete weAnimoji. Iwo anozivikanwa emoji mavara eiyo iPhone X vanozvikweretesa ivo pachavo mukugadzira zvinonakidza clip ... hutachiona uye kazhinji hazvina musoro.
Iyo yekumisikidza yakatemerwa Animoji inoita kuti avo vanoishandisa vaone senge kupenga kuziva maitiro ekuti utore iwo ma clip kunze kweMessage app uye ugone kuashandisa chero chavanoda. Uku kupokana kwakakonzera kune vamwe vashandisi shandisa iyo skrini yekurekodha basa yeIOS 11 kana QuickTime uye wozotumira kugadzirisa mune yevhidhiyo yekugadzirisa app. Basa chairo, handiti?
Zvakanaka, ndizvo zvinoita kuti iyo Støvring app inyanye kuyedza. Akagadzira chishandiso icho mumaonero ake chinofanirwa kuve chakazvimiririra kubva pazuva rekutanga, uye zvakare chakamubvumidza kuti arekode ma clip akareba. Støvring's tsika iOS app shandisa zvakavanzika APIs iyo inogona kuwana mashandiro akafanana neayo Apple ndeayo Animoji. Nezuro chete Steve Troughton-Smith akatumira kuti tsika Animoji-centric app inogona kuitika, uye Støvring akakurumidza kuratidza kuti zvaigona.
Iko kunyorera, SBSAnimoji, inobvumira vashandisi kurekodha zviri nyore uye kugovana Animoji clip yakakura kupfuura makumi maviri masekondi. Iko kuwedzera kudiki kubva kuMessage app's gumi-yechipiri kukamurwa, asi Støvring akataura kuti arikutsvaga kuwedzera urefu uhwo mberi. Nehurombo, mikana yekuona iyi application muApp Store inenge isiri nil. Iko kushandiswa kunoshandisa seti yeakavanzika APIs, iko kushandiswa kwayo kunowanzo ganhurirwa kune akajairwa Apple iOS kunyorera. Kunyangwe maAPIs ari ega, izvo hazvitadzise vanogadzira kuziva kubva kuvatsvaga nekutamba navo. Apple haisati yazivisa kuti kana kwete Animoji APIs ichave yakavhurika kune vechitatu-bato vanogadzira mune ramangwana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Animoji seyakazvimirira Meseji app
Apple yaizowedzera huwandu hwekugadzirwa kweApple Watch
Apple inotipa chiitiko chitsva chekupemberera Zuva reVeterans